सर्वाधिक बजार पूँजीकरण भएको नेपाल दुरसञ्चार कम्पनीले ३ अर्ब २८ करोड खुद नाफा कमायो « Aarthik Sanjal सर्वाधिक बजार पूँजीकरण भएको नेपाल दुरसञ्चार कम्पनीले ३ अर्ब २८ करोड खुद नाफा कमायो – Aarthik Sanjal
सर्वाधिक बजार पूँजीकरण भएको नेपाल दुरसञ्चार कम्पनीले ३ अर्ब २८ करोड खुद नाफा कमायो
३० माघ २०७७, शुक्रबार १२:०४
काठमाडौं । धितोपत्र दोस्रो बजारमा सर्वाधिक पूँजीकरण भएको नेपाल दुरसञ्चार कम्पनीले चालू आवको दोस्रो त्रैमाससम्म रू। ३ अर्ब २८ करोड ९३ लाख ९४ हजार खुद नाफा गरेको छ । यो नाफा गत वर्षको यसै अवधिसम्म रू. ४ अर्ब ९३ करोड ९१ लाख ५० हजार रहेको थियो । गत वर्षभन्दा यस वर्ष कम्पनीको खुद नाफा ३३ दशमलव ४० प्रतिशत कम भएको हो ।
यस वर्ष कम्पनीले रू. २० अर्ब ५७ करोड ५९ लाख २५ हजार कुल आम्दानी गरेको छ । यो आम्दानी गत वर्ष रू. २१ अर्ब ९२ करोड ६८ लाख ४२ हजार रहेको थियो । आम्दानी कम भएसँगै कम्पनीको खुद नाफा घटेको हो । यस कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. १५ अर्ब रहेको छ ।
धितोपत्र दोस्रो बजारमा बिहीवार कम्पनीको अन्तिम शेयरमूल्य रू। १ हजार ४१० कायम भएको छ । दोस्रो त्रैमाससम्म कम्पनीको जगेडा कोष रकम रू. ८० अर्ब ३७ करोड ५४ हजार रहेको छ । गत वर्षको भन्दा कम्पनीको जगेडा कोष रकम ४ दशमलव ५९ प्रतिशत बढी भएको हो ।
गत वर्ष यस अवधिसम्म कम्पनीको जगेडा कोष रकम रू. ७६ अर्ब ८४ करोड २१ लाख ८६ हजार थियो । कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी रू. ४३ दशमलव ८६ र प्रतिशेयर नेटवर्थ रू। ४३ दशमलव ८६ र प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. ६३५ दशमलव ८० रहेको छ ।